खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरुका लागि खानपान पनि चिन्ताको बिषय हो । » Mero Khel
१४,मंसिर,२०७७ ( Sunday, November 29, 2020 ) 7: 18 am
काठमाडौ । दसैंको आगमनसँगे नेपाली खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरुका लागि खानपान पनि चिन्ताको बिषय हो । अझ खेलाडीहरुले त झन आफ्नो लय कायमै राख्न तथा दसैंपछि पनि आफ्नो खेल जीवनलाई सशक्त ढंगले अघिबढाउन खानपानमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
दसैंलाई हर्षोल्लास र आफन्तजन भेटघाटको पर्वको रुपमा मनाउने प्रचलन छ । यो समय अन्य समयभन्दा अधिक मात्रामा मासुजन्य साथै मसलेदार परिकारको खपत बढी हुन्छ । त्यसैले खेलाडीका लागि पनि यो समय खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने पर्व हो ।
खेलाडीले दसैंमा खानपानमा ध्यान नदिए पर्वपछि खेलमा फर्किदाँ कठिन हुने पक्का छ भने लयमा फर्किन निकै गाह्रो हुने छ । त्यसैले नेपाली खेलाडीले दसैैंमा नखाएर कहिले खाने भन्नु भन्दा पनि स्वाथ्यकर खानामा जोड दिन जरुरी छ ।
वर्ष २०७७ को दसैं अन्य बर्षहरुभन्दा अलि फरक पनि हुनेछ । किनकी यो बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी पनि कायमै छ । दसैं यस्तो बेला परेको छ, जुन बेला खेलाडीले लामो समय प्रशिक्षण विहिन हुँदै घरमा बस्नु परेको छ । लामो समय प्रशिक्षण विहिन बसेका खेलाडीले दसैंमा खानपानमा ध्यान नदिए भोलीका दिनमा लयमा फर्किन उनीहरुलाई निकै नै गाह्रो अवस्य पर्नेछ । त्यसैले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलि बढीनै बिचार पुर्याउनु पर्ने बर्ष हो ।
दसैंमा खेलाडीले के–के कुरामा ध्यानदिने त ? के भन्छन्, खेल प्रशिक्षकहरु ?
बालगोपाल महर्जन (फुटबल प्रशिक्षक)
खेलाडीले सधैं खेल अभ्याससँगै डाइटिङमा विचार पु¥याउनुपर्छ । दसैंमा परिवारका सबैजना जम्माहुने मीठो मसिनो खाने प्रचलन छ । अहिलेको समयमा मीठो भन्दा पनि स्वाथ्यकर र शक्तिबर्धक खाना खानु जरुरी छ । खेलाडीले पनि यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर खानपान गर्दा राम्रोहुन्छ । सुरक्षित तरिकाले परिवारजनसँग भेटघाट गर्नुस्, खानपानसँगै केही समय अभ्यासमा पनि दिनुस् । महामारीलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित रुपमा दसैं मनाउनुहोस् । खेलाडीसँगै सम्पुर्ण नेपालीमा विजया दशमीको शुभकामना ।
दिपक विष्ट (तेक्वान्दो प्रशिक्षक)
मौसम परिवर्तनको समय छ, प्रत्येक घरमा एक न एक व्यक्ती बिरामी हुनुहुन्छ । कोरोना महामारिमै दसैं मनाउँदै छौँ । यो वर्ष दसैं भन्दा पनि महामारी ठूलो भैदिएको छ । अलिकति मात्रै खानपानमा ध्यान दिनसके पनि खेलाडी केहि हद सुरक्षित रहन सकिन्छ । खेलाडीहरु कसैले पनि अनुसासनहिन तरिकाले खाने र बाहिर घुमफिरको लागि निस्कने काम नगरौं ।
महामारीलाई ध्यानमा राखी तातो पानी खाने, जङ्गफुड नखाने, झोलिलो ताजा खाने कुरा खाने र माछामासु ज्यादा मसलेदार भन्दा पनि मात्रा मिलाएर खाने । देशको गहनारुपी खेलाडीले आफू भाइरसबाट सुरक्षित रहि परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्ने प्रयत्न गर्नुस् ।
खेलाडिको लागि अभ्यास जहिले पनि आवश्यक छ । चाडवाँडको समयमा खानपिनमा ध्यानदिँदै केही समय अभ्यासको लागि छुट्याउनु होस् । खेलाडी साथै सम्पुर्णमा दसैं को शुभकामना ।
हिरा थापा (स्क्वास प्रशिक्षक)
अहिले खेलाडीमात्र नभई सम्पुर्ण व्यक्तिले खानपानमा धेरै नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने समय छ । खेलाडीले त खानपानमा जहिल्यै ध्यानदिनु पर्छ । कोरोनाकै कारण धेरै समयदेखि खेलकुद बन्द छ । स्वास्थ्य ठूलो कुरो हो । अहिले हामी जसरी हुन्छ स्वास्थ्य रहौ र खानपानमा ध्यान दिऔँ । दसैं अर्को वर्ष धुमधामका साथ मनाउँला, खेल अर्को वर्ष खेलौला ।
रोग लागेर कठिन परिस्थितिसँग जुध्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिऔ । खेलाडी, प्रशिक्षक लगायत सम्पुर्णमा नेपाली स्क्वास परिवारको तर्फबाट दसैंको शुभकामना ।
( प्रशिक्षक थापाले यो बर्ष आफैं कोरोना भाइरसको संक्रमण अनुभव गरेका थिए )
भगवती राना मगर (महिला फुटबल प्रशिक्षक)
खेलाडीले आफुलाई फिट राख्न दसैंको बेला पनि थोरै समय भएपनी अभ्यासमा ध्यानदिनुपर्छ । खानामा पनि स्वास्थ्यकर खानामा जोड दिनुपर्छ । ताजा फलफूल, माछामासु पनि ताजा खाने, जङ्ग फुट नखादा राम्रो हुन्छ ।
दिनेशचन्द्र नकर्मी (बास्केटबल प्रशिक्षक)
दसैं भन्दैमा खेलाडीले जस्तो पायो तेस्तै खाने, अभ्यासलाई बेवास्ता गर्ने कार्य गर्नुहुदैन । खेलाडीले धेरै कुरालाई ध्यानदिनुपर्छ । खेलाडीले आफ्नो अनुसासनलाई विचार गरि चिल्लो जन्य खाना सक्भर नखाने र मदिरा सेवन नगरी दसै मनाउँदा राम्रो हुन्छ । अहिलेको दसैं कोरोनाले गर्दा त्यत्ती राम्रो पनि छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः निराशामा बितेको क्यानको एक बर्ष
Tagscelebration dashain diet festival season food players festival कोभिड–१९ खानपान खेलकुद क्षेत्र जीवन डाइटिङ दसैं नेपाली स्क्वास माछामासु स्वाथ्यकर खाना
Previous Postभारतीय अभिनेता सोहेल खानले किने लंका प्रिमियर लिग क्लबPrevious Post
Next Postनेपाली ब्याडमिन्टन क्लबले डेनमार्कमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै,नयाँ कार्यसमिती चयनNext Post
Home>फिचर समाचार>दसैंमा खेलाडीले के–केमा ध्यान दिने ?